एक निजी घर को जग लागि मार्क ठोस। ठोस कस्तो ब्रान्ड यसलाई जग लागि आवश्यक छ
ठोस आधुनिक भवन सामाग्री प्राकृतिक पत्थर संग प्रतिस्पर्धा बल हो। यसको उच्च प्रदर्शन यसलाई जग निर्माण सहित निर्माण काम सबै प्रकार को उत्पादन मा लोकप्रियता सुनिश्चित। ज्योति फिटिंग प्रयोग गर्न सकिन्छ भने घाट जग, त्यसपछि स्थायी संरचना आवश्यक गुणस्तर टेप वा ढेर जग, विशेषताहरु जो सीधा ठोस गुणस्तर, कुशल मिश्रण र ध्यानपूर्वक चयन कर्मचारी को विकल्प मा निर्भर।
यस लेखमा हामी जग लागि प्रयोग के ठोस हेर्न हुनेछ।
दुई मुख्य घटक ठोस मिश्रण मा प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ:
आंशिक फिलर (बालुवा, ढुङ्गा वा रोडा) - "शक्ति" सबै भार स्वीकार गर्ने तत्व। को संरचना मा मात्रा अंश - 80%।
बांधन मिसिन, को सिमेन्ट मिश्रण र पानी सम्पर्क गरेर प्राप्त। को संरचना मा मात्रा अंश - अप 30% गर्न।
यस यी पदार्थ को अनुपात ठोस मिश्रण को आधारमा, फरक हुन सक्छ सिमेन्ट, को ब्रान्ड फिलर चिस्यान, additives को उपस्थिति। जग - निर्माण को एक वाहक भाग, त्यसैले तपाईं डिजाइन भार प्रतिरोध प्रदान गर्ने अधिकार ठोस मिश्रण चयन गर्न आवश्यक छ। ठोस राम्रो सङ्कुचन कि जग सफलतापूर्वक जमीन संरचना दबाब सामना गर्न अनुमति दिन्छ काम गर्दछ। जग प्रयोग पिंजरे Reinforcing, र माटो को स्थानांतरण बेला transverse दिशा मा बल प्रदान गर्दछ।
जग लागि ठोस को छनोट भवन डिजाइन erected भइरहेको निर्भर गर्दछ। त्यहाँ व्यवहार मा ठोस ग्रेड को एक विस्तृत श्रृंखला प्रयोग गर्न जान्छ जो जग, विभिन्न आवश्यकताहरू।
यस प्रश्नको जवाफ, एक निजी घर को जग लागि के ठोस को ग्रेड उपयुक्त छ, आधारभूत प्रकार विचार गर्नुहोस्।
ठोस ब्रान्ड M100
को हल्का ठोस एक कम सिमेन्ट सामग्री छ बुझाउँछ। ठोस तयारी घनघोर गर्दा मुख्य आवेदन, निर्माण कार्य को प्रिपेरेटरी चरणमा छ। M100 सस्ती छ, तर यसको बल विशेषताहरु जस्तै बाड, फ्रेम घरहरू, barns रूपमा अर्ध-स्थायी संरचना, को प्रयोगलाई सीमित।
ठोस ब्रान्ड M150
यसको विशेषताहरु अनुसार, यो ठोस को ग्रेड छैन M100 धेरै फरक छ। मुख्य आवेदन - प्रिपेरेटरी निर्माण कार्य। M150 ठोस मात्र ज्योति काठ वा खोक्रो ब्लक, गैरेज र शेड बनेको एक-मंजिल्ला घरहरू प्रकाश पट्टी नींव हालिएको गर्न सकिन्छ। को चट्टानी जमीन एक विश्वसनीय आधार रूपमा कार्य गर्नेछ भने एक निजी घर को जग लागि ठोस यस ग्रेड मात्र गर्न दिईने छ। अन्यथा waterproofing (तरल रबर) को आवेदन आवश्यक बढाउन जग किनभने भूमिगत जोखिम को असम्भव छ।
ठोस ब्रान्ड M200
यो ठोस पहिले नै बलियो र अक्सर कम वृद्धि को निर्माण काठ वा धातु बीम संग (दुई storeys सम्म) भवनहरु मा प्रयोग भएको छ। ठोस को M200 ब्रान्ड जस्तै बवासीर वा तल्ला slabs रूपमा ठोस उत्पादन, निर्मित गर्न सकिन्छ। आवासीय निर्माण मा मुख्य आवेदन - फ्रेम-प्यानल घरहरू अन्तर्गत जग को घनघोर। माटो यसरी यो खाता मौसमी भेरिएसनहरूमा मा लिन आवश्यक छ, केवल बालुवा र पानी तालिकाले चिसो उचाइ बढाएर हुन हुँदैन अनुमति दिएको छ।
ठोस ब्रान्ड M250 र M300
औसत - सिमेन्ट सामग्री। घर (भर्नको लागि) को जग लागि ठोस को प्रयोग M250 औं ग्रेड अप तीन तलाहरू गर्न। मार्क M300 - टिकाउ ठोस थप, यो अप गर्न पाँच फर्श संग घरहरू को नींव मा प्रयोग गरिन्छ। भवन कोड अनुसार, ठोस ब्रान्ड M300 अखंड slabs को निर्माण को लागि अनुमति। basins घनघोर जब यो प्रयोग गरिन्छ। ठोस डाटा चिह्न रोडा को जमीन मा साथै बलौटे soils मा जग को पुनर्जनन मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, वा अपेक्षाकृत उच्च भूमिगत स्तर को रक चोट।
ठोस ब्रान्ड M350
एक ठोस को निर्माण मा सबै भन्दा लोकप्रिय ब्रान्ड को। निकै भएको M300 मात्र होइन बल, तर पनि चिसो बढी छ। यसो लामो सेवा जीवन द्वारा विशेषता।
यस कन्सोल फर्श को निर्माण मा प्रयोग बहु-मंजिल्ला भवन को निर्माण, र अन्य महत्त्वपूर्ण संरचना लागि उपयुक्त। ब्रान्ड M350 को ठोस जग निर्माण संग ईटा को घर वासस्थान एक-मंजिल्ला लागि लागू गर्न अनुमति दिएको छ। कठिन माटो soils र स्थानहरू जहाँ उच्च भूमिगत स्तर लागि उपयुक्त। Loam र माटो soils - सबै भन्दा साधारण। चिसो, जो ठोस को गलत तरिकाले चयन ग्रेड को घटना मा जग को विरूपण सक्छ मात्रा मा माटो बढ्छ।
ठोस ब्रान्ड M400
यो ब्रान्ड एक अति उच्च बल सिमेन्ट उच्च सामग्री र विशेष चयन फिलर कारण विशेषताहरु छ।
यो एक निजी घर को जग लागि ठोस यस ग्रेड प्रयोग। आवेदन पनि अनुमति क्षेत्र - बहु-मंजिल्ला भवन (अप उचाइ 20 storeys गर्न) को निर्माण।
जग लागि ठोस कस्तो ब्रान्ड आवश्यक?
ठोस कम ग्रेड सस्ता, तर जग निर्माण राम्रो विशेष गरी ती अवस्थाहरूमा जहाँ यो वासस्थान को तहखाने बनाउन योजना छ लागि, सुरक्षा केही मार्जिन प्रदान गर्न छ। जग लागि ठोस कस्तो ब्रान्ड आवश्यक? ठोस चिह्न M350, M400 उच्च घनत्व छ, र यसैले चिस्यान बुरा therethrough भित्र पस्नु र सकेट हाय हुनेछ। ठोस वा ठोस को एक उच्च ग्रेड प्रयोग सस्ता, तर भूमिगत विरुद्ध सुरक्षा गर्न जग waterproofing व्यवहार: कहिलेकाही, गरिब माटो मा गैर-महत्वपूर्ण संरचना निर्माण, यो थप लाभदायक छ के विचार गर्न अर्थमा बनाउँछ।
घर को जग लागि ठोस को आवश्यक ग्रेड के हो निर्धारण गर्न सजिलो तरिका, के ब्रान्ड चयन गर्न - यो डिजाइनर लागि डिजाइन अनुमान को आरक्षण गर्न छ। यसलाई ठोस को उपयुक्त ग्रेड प्रत्येक छिंडीमा सहित, काम को प्रकार को लागि परिभाषित गर्दै छन्, र अतिरिक्त गुण जस्तै, समाधान द्वारा सन्तुष्ट हुन:
पानी प्रतिरोध (भूमिगत को सुरक्षा)
चिसो (उच्च कठोर जलवायु लागि थप उपयुक्त)
तथापि, एक निजी घर को जग लागि ठोस को ग्रेड स्वतन्त्र समायोजित गर्न सकिन्छ। यो गर्न, निर्माण संरचना रहेको निम्न सुविधाहरू विचार गर्नुपर्छ:
वजन निर्माण, तल्लाहरु को संख्या, उपस्थिति वा छिंडीमा को अभाव,
भूवैज्ञानिक साइट अनुसन्धानहरूले: माटो र जमीन पानी गहिराई खोजन को प्रकार निर्धारित,
नींव को प्रकारको: पट्टी, ढेर वा अन्य कुनै पनि।
माथिको कारक प्रत्येक यसको विशेष विशेषताहरु, आदि दिइएको, केही जग, ब्रान्ड को ठोस विकल्प लागि ठोस आवश्यक बाटो असर
एक ठोस अखंड जग कार्य मा oppositely को परिधि मा सेना निर्देशित। यो चिसो को स्तर तल थियो भनेर जग भुइँमा मा अझ बलियो हुनुपर्छ। चिसो को गहिराई को विशिष्ट मान माटो र जमिनको अवस्था निर्भर व्यापक फरक हुन्छन्। सामान्य मा, मध्य-अक्षांश चिसो स्तर लागि 0.9-1.5 मिटर छ। यसको गहिराई केही आरक्षित संग चयन गर्न सिफारिस गरिएको छ। एक माटो जग, छैन चिसो विषय मा रिलायन्स, चिसो heaving विरूपण देखि पट्टी जग सुरक्षित।
पट्टी जग लागि ठोस तल्लो ग्रेड फिट, तर ढेर, त्यसको विपरीत, यो उच्च र बलियो आवश्यक छ। ढेर नींव बहु-मंजिल्ला भवन राजधानी को निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ। सुसज्जित गर्न पट्टी नींव कम वृद्धि भवन।
चयन र ठोस मिश्रण ब्याच को संरचना
एक पूर्ण बिभिन्न अवधारणा - समान पदनाम, ठोस ग्रेड र सिमेन्ट ब्रान्ड बावजुद। को सिमेन्ट ब्रान्ड मा नम्बर अर्थ बल grout।
जग संरचना transverse बल प्रदान गर्ने यसको सुदृढीकरण मान्छ किनभने, त्यसपछि यो इष्टतम रोडा वा रोडा मध्य अंश चयन गर्न छ। यसलाई पकड चोट ग्रेनाइट रोडा प्रदान गर्न सबै भन्दा राम्रो छ।
बालुवा, सिफारिस समुद्र को सिद्धान्त, तर फिट र तनावमुक्त बालुवा पिट देखि, को लागि रूपमा। यो माटो र अन्य खराब समावेशन जोगिन, बालुवा पहिलो सकिन गर्नुपर्छ भनेर याद महत्त्वपूर्ण छ।
पानी कुनै विशेष आवश्यकताहरु, उपयुक्त साधारण ट्याप छन्। पानी-सिमेन्ट अनुपात 2: 1।
एक प्राथमिक विधि एक मिक्सर उपयोग गर्न छ, तर यो समाधान को सम्भव र मार्गदर्शन यांत्रिक आन्दोलन हो। यो थोक समाई, बालुवा, रोडा वा चोट पत्थर र सिमेन्ट विशिष्ट अनुपात मा थपिएको छ जो आवश्यक हुनेछ। राम्रो मिश्रित ड्राई घटक, बिस्तारै सम्म चिल्लो निरन्तर जगाएर गर्दा पानी थप्न सकिन्छ। यो पानी संग यो ज्यादा छैन महत्त्वपूर्ण छ।
ठोस को आवश्यक रकम को गणना
अवैध गणना सामाग्री अभाव वा पनि खराब छ जो अधिशेष फारम, सामना।
छुट्टाछुट्टै गणना मात्रा प्लेट पट्टी जग स्ट्रिप्स, स्तम्भहरु, त्यसपछि सारांशित जुन। को गणना मूल्य ठोस को दबाव को गुणक ले गुणन छ, जो को परिमाण पासपोर्ट देखि लिइएको छ। को वाल्व पनि formwork मा एक निश्चित मात्रा ओगटेको देखि, त्यसपछि लागि यो रकम ठोस को 1.05 को एक कारक द्वारा विभाजित गर्नुपर्छ खाता। परिणामस्वरूप मूल्य राउण्ड छ।
ठोस जग के आवश्यक छ छ
विकल्प लागि निर्देशन:
ध्यान संरचना को वजन गणना;
कारण सम्भव त्रुटिहरू वा contingency गर्न मार्जिन आवंटित;
को भूमिगत उत्पन्न जो मा गहिराई निर्धारण;
माटो को अन्तरक्रिया र भविष्यमा जग निर्धारण।
ताप सिस्टम खुला: डिजाइन विवरण
एक बार को लागि एक पत्थर अन्तर्गत अलंकार छनौट
को ग्रीनहाउस गर्न polycarbonate को मोटाई। कसरी बाक्लो polycarbonate सर्वश्रेष्ठ Greenhouses लागि प्रयोग गरिन्छ?
जग लागि स्क्रू बवासीर को गणना। लोड को सही गणना कसरी बनाउने?
के पीवीसी Windows को लागि प्रोफाइल राम्रो छ? चयनको लागि मापदण्ड
एक अभिभावक संग अंग्रेजी सिक्न तीन कारण
कसरी उपयोगी योग मानिसहरू लागि?
सुन्तला: अर्थ र आवेदन
Rentiers - उहाँले जो छ र त्यो के गरिरहेको छ?
के हरर सबैभन्दा खराब?
आरपीजी-29 र यसको tandem खोल
माफ गर्नुहोस् भन्दा राम्रो सुरक्षित, वा गर्भवती महिला एक हवाइजहाज मा उड गर्न सक्नुहुन्छ?
कसरी गर्मी मा किंडरगार्टन साइट आकर्षित गर्न सिक्न
अर्थ कि पेट मा चुम्बन?
खाना एक साधारण गाई parsnip बिरुवाहरु "stalin गरेको बदला लिन" थियो?
अभिनेत्री र मोडेल लौरा Harring